အလုပ်နေရာအမျိုးမျိုး ဂျပန်လို ဘယ်လိုပြောလဲ1 | Working Friends
အလုပ်နေရာအမျိုးမျိုး ဂျပန်လို ဘယ်လိုပြောလဲ1
2018年1月1日 2018年1月15日 EM
အလုပ်နေရာအမျိုးမျိုး ဂျပန်လို ဘယ်လိုပြောလဲ
တစ်ခါက အလုပ်အင်တာဗျူးမှာ မားကတ်တင်းစိတ်ဝင်စားပါတယ်ဆိုပြီး ဖြေခဲ့ဖူးပါတယ်။ အဲ့တော့ စစ်ဆေးသူကပြန်မေးလိုက်တာက မားကတ်တင်းဆို ဘယ်လိုအလုပ်မျိုးလို့ထင်လဲတဲ့။
ကိုယ်ကိုတိုင်က မားကတ်တင်းဆိုရင် ဈေးကွက်ပိုင်းပဲလို့ထင်ပြီး၊ အသေးစိတ်ခွဲခြားပုံတော့ သေချာမသိဘူးလေ။
မားကတ်တင်း ဆို ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်လို့ပဲ သိခဲ့တာဆိုတော့ ဖြေဖို့အခက်ကြုံတာပေါ့။
ဖျတ်ကနဲစဉ်းစားမိတာက သုံးစွဲသူတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုမျိုး ဖြစ်ပြီး၊ ဥပမာဆိုရင်営業、経営 လိုမျိုးအလုပ်ပါလို့ ဖြေလိုက်ပါတယ်။
တကယ်တမ်း အလုပ်အင်တာဗျူးဖြေတဲ့အခါ မိမိမျှော်မှန်းအလုပ်နေရာကို ဘာကြောင့်ရွေးလိုက်တာလဲ။ အဲဒီအလုပ်က ဘယ်လိုအလုပ်မျိုးလို့ထင်လဲ ဆိုပြီး မေးခွန်းများထပ်မေးလေ့ရှိပါတယ်။
ဥပမာ- စားသောက်ဆိုင်မှာလုပ်ရင် ဘယ်လိုအလုပ်ကို တာဝန်ယူတာလဲ။
ဟင်းချက်တာလား၊ စားပွဲထိုးလား စသဖြင့်ပေါ့နော်။
ခဏခဏမေးလေ့ရှိတာက “ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီမှာ ဘာလုပ်ချင်တာလဲ”
ပြန်ဖြေရင် ကိုယ်ပြောချင်တာ တခြား အဓိပ္ပာယ်ထွက်တာက တစ်ခြားဖြစ်တာတွေ ကြုံရပါတယ်။ ကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်း ခဏခဏ လွဲခဲ့လို့ပါ။
“ဒါ့ကြောင့် ဂျပန်လို အလုပ်နေရာလေးတွေကို ဘယ်လိုပြောတယ်။ အဲ့အလုပ်က အကြမ်းမျဉ်းအားဖြင့် ဘာလုပ်ရတာလဲ။”
များသောအားဖြင့် အလုပ်အမျိုးအစား ခွဲတာကတော့ ဒီလိုပါ။
ရုံးထိုင်လုပ်ငန်း၊ အထွေထွေရုံးလုပ်ငန်း အမျိုးအစား
အရောင်းအဝယ်၊ အစားအသောက်လုပ်ငန်း နှင့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း အမျိုးအစား
အိုင်တီ၊ အိုင်တီအင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်း အမျိုးအစား
အင်တာနက်နှင့် ဒီဇိုင်းတီထွင်လုပ်ငန်း အမျိုးအစား
ဆေးကုသရေး၊သူနာပြုစုစောင့်ရှောက်ရေး၊သုတေသနနှင့် သင်ကြားရေး အမျိုးအစား
စက်ရုံ၊အလုပ်ရုံ၊ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး အလုပ်(ကုန်ပစ္စည်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထုပ်ပိုးရေးပိုင်း)၊ ကုန်တင်ကုန်ချပို့ဆောင်ရေး၊ သစ်သားနှင့် မြေ( ဆောက်လုပ်ရေးပိုင်း၊ထုတ်လုပ်ရေးပိုင်း) အမျိုးအစား
ပထမဆုံး ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာ အလုပ်အမျိုးအစားတွေကို ပြောပါမယ်နော်
အလုပ်အမျိုးအစားအလိုက် လိုအပ်မယ့် အခြေခံ အရည်အချင်းက???
Office Work N3၊N2၊N1
Human Resource N3၊N2၊N1
Secretary N1 ~
microsoft excel and other
Reception (information) N3၊N2၊N1
Call Center N2၊N1
ရုံးထိုင်လုပ်ငန်း၊ ကွန်ပျူတာအသုံးပြုလုပ်ကိုင်တဲ့ ရုံးလုပ်ငန်း။ စာရွက်စာတမ်းတွေ ပြုလုပ်ပြင်ဆင်၊ ဒေတာအချက်အလက်တွေကနေ စီးပွားရေးဖြစ်မြောက်အောင် အမျိုးမျိုး လုပ်ကိုင်ရတဲ့အလုပ်။ ကုမ္ပဏီမှာပဲ အေးအေးဆေးဆေး အလုပ်လုပ်ရတာများပါတယ်။
စီးပွားရေးဆိုင်ရာ manner အပြုအမူဗဟုသုတ၊စည်းမျဉ်း (အခြေခံလောက်ဖြစ်ဖြစ် သိထားရမယ်)
ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး (ဂျပန်စာ N3အထက်)
ကွန်ပျူတာအခြေခံနှင့်အထက် တတ်ကျွမ်းရ ( Microsoft word,excel)
ဝန်ထမ်းရေးရာပိုင်းပေါ့နော်။ဒီအပိုင်းကတော့ ဂျပန်လူမျိုးတွေ များမယ်ထင်ပါတယ်။ ဝန်ထမ်းခေါ်ယူတာကအစ ဝန်ထမ်းအဆင်ပြေပြေအလုပ်လုပ်နိုင်အောင် ထောက်ပံ့ပေးရတာ။ စီမံဌာနပေါ့
စီးပွားရေးဆိုင်ရာ manner အပြုအမူဗဟုသုတ၊စည်းမျဉ်း
ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး (ဂျပန်စာ N3၊N2၊N1)
ကွန်ပျူတာတတ်ကျွမ်းရ ( Microsoft word,excel)
ဝန်ဆောင်မှုပိုင်း ကောင်းမွန်ရင် ပိုအဆင်ပြေ
အကြီးအကဲရဲ့ လက်ထောက်၊ ။ လုပ်ငန်းပိုင်း အချိန်ခွဲခြမ်းစီမံတာကအစ၊ စာရွက်စာတမ်းပိုင်း စစ်ဆေးရတာတွေအထိ ။ဂျပန်မှာတော့ ဒီအလုပ်နေရာက ဂျပန်လူမျိုးများပါတယ်။
ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး (ဂျပန်စာ N1အထက်)
ရုံးဘဏ္ဍာရေး၊ စာရင်းအင်း စသဖြင့်
စာရင်းအင်းအထောက်အကူပြု လက်မှတ်၊ လိုင်စင် (သို့) certificate
ဧည့်သည်လာရင် ဧည့်ခံ ဝန်ဆောင်မှုပေးရ။
ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး (ဂျပန်စာ N2၊N1)
ဝန်ဆောင်မှုပိုင်းဆိုတော့ စကားပြောဆိုတတ်မှ ပိုအဆင်ပြေပါတယ်။
ဖုန်းအော်ပရေတာ၊ ဖုန်းနှင့် ဆက်သွယ်ပြောဆိုရမှာပါ။
ပြဿနာဖြေရှင်းတဲ့အနေနှင့် ဖုန်းဆက်သွယ်ရတာရှိသလို၊ လုပ်ငန်းအချိတ်အဆက်နှင့် ဆက်သွယ်ရမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဂျပန်စာအရည်အချင်းကတော့ တော်တော်စကားပြောနိုင်ရမှာပါ။
ဂျပန်မှာ မားကတ်တင်းလို့ပြောလိုက်ရင်営業ပိုင်းနှင့် နည်းနည်းတော့ကွာပါတယ်။
နောက်ဆုံး အသုံးချစေမယ် ဆိုတဲ့ အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
စီမံရေးအပိုင်းလို့လည်း ပြောနိုင်ပါတယ်။ဂျပန်မှာတော့ Web Marketing ခေတ်ဖြစ်ပါတယ်။ အင်တာနက်ကို အသုံးချပြီး analysis။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနည်းကတော့ တစ်ခုနှင့် တစ်ခု မတူညီကြဘူးပေါ့။ ကိုယ့်လုပ်ငန်းတိုးတက်ဖို့ အမြဲရှာဖွေနေတာပေါ့။
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသမားလို့ ပြောရင်လည်း ရပါတယ်။
အထောက်အကူပြု လက်မှတ် (မရှိရင်လည်း အဆင်ပြေပါတယ်)
ကျန်အလုပ်အကိုင်အသုံးအနှုန်းလေးတွေကိုတော့ နောက်တစ်ပါတ်မှ တင်ဆက်ပေးပါမယ်နော်။
နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်မှုအပေါင်း ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။
အလုပျနရောအမြိုးမြိုး ဂပြနျလို ဘယျလိုပွောလဲ
တဈခါက အလုပျအငျတာဗြူးမှာ မားကတျတငျးစိတျဝငျစားပါတယျဆိုပွီး ဖွခေဲ့ဖူးပါတယျ။ အဲ့တော့ စဈဆေးသူကပွနျမေးလိုကျတာက မားကတျတငျးဆို ဘယျလိုအလုပျမြိုးလို့ထငျလဲတဲ့။
ကိုယျကိုတိုငျက မားကတျတငျးဆိုရငျ စြေးကှကျပိုငျးပဲလို့ထငျပွီး၊ အသေးစိတျခှဲခွားပုံတော့ သခြောမသိဘူးလေ။
မားကတျတငျး ဆို စြေးကှကျစီးပှားရေးစနဈလို့ပဲ သိခဲ့တာဆိုတော့ ဖွဖေို့အခကျကွုံတာပေါ့။
ဖတျြကနဲစဉျးစားမိတာက သုံးစှဲသူတှရေဲ့ လိုအပျခကျြနှငျ့ ကိုကျညီတဲ့ ဝနျဆောငျမှုမြိုး ဖွဈပွီး၊ ဥပမာဆိုရငျ営業、経営 လိုမြိုးအလုပျပါလို့ ဖွလေိုကျပါတယျ။
တကယျတမျး အလုပျအငျတာဗြူးဖွတေဲ့အခါ မိမိမြှျောမှနျးအလုပျနရောကို ဘာကွောငျ့ရှေးလိုကျတာလဲ။ အဲဒီအလုပျက ဘယျလိုအလုပျမြိုးလို့ထငျလဲ ဆိုပွီး မေးခှနျးမြားထပျမေးလရှေိ့ပါတယျ။
ဥပမာ- စားသောကျဆိုငျမှာလုပျရငျ ဘယျလိုအလုပျကို တာဝနျယူတာလဲ။
ဟငျးခကျြတာလား၊ စားပှဲထိုးလား စသဖွငျ့ပေါ့နျော။
ခဏခဏမေးလရှေိ့တာက “ကြှနျတျောတို့ကုမ်ပဏီမှာ ဘာလုပျခငျြတာလဲ”
ပွနျဖွရေငျ ကိုယျပွောခငျြတာ တခွား အဓိပ်ပာယျထှကျတာက တဈခွားဖွဈတာတှေ ကွုံရပါတယျ။ ကြှနျမကိုယျတိုငျလညျး ခဏခဏ လှဲခဲ့လို့ပါ။
“ဒါ့ကွောငျ့ ဂပြနျလို အလုပျနရောလေးတှကေို ဘယျလိုပွောတယျ။ အဲ့အလုပျက အကွမျးမဉျြးအားဖွငျ့ ဘာလုပျရတာလဲ။”
မြားသောအားဖွငျ့ အလုပျအမြိုးအစား ခှဲတာကတော့ ဒီလိုပါ။
ရုံးထိုငျလုပျငနျး၊ အထှထှေရေုံးလုပျငနျး အမြိုးအစား
အရောငျးအဝယျ၊ အစားအသောကျလုပျငနျး နှငျ့ ဝနျဆောငျမှုလုပျငနျး အမြိုးအစား
အိုငျတီ၊ အိုငျတီအငျဂငျြနီယာလုပျငနျး အမြိုးအစား
အငျတာနကျနှငျ့ ဒီဇိုငျးတီထှငျလုပျငနျး အမြိုးအစား
ဆေးကုသရေး၊သူနာပွုစုစောငျ့ရှောကျရေး၊သုတသေနနှငျ့ သငျကွားရေး အမြိုးအစား
စကျရုံ၊အလုပျရုံ၊ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး အလုပျ(ကုနျပစ်စညျးခှဲခွမျးစိတျဖွာထုပျပိုးရေးပိုငျး)၊ ကုနျတငျကုနျခပြို့ဆောငျရေး၊ သဈသားနှငျ့ မွေ( ဆောကျလုပျရေးပိုငျး၊ထုတျလုပျရေးပိုငျး) အမြိုးအစား
ပထမဆုံး ရုံးပိုငျးဆိုငျရာ အလုပျအမြိုးအစားတှကေို ပွောပါမယျနျော
အလုပျအမြိုးအစားအလိုကျ လိုအပျမယျ့ အခွခေံ အရညျအခငျြးက???
ရုံးထိုငျလုပျငနျး၊ ကှနျပြူတာအသုံးပွုလုပျကိုငျတဲ့ ရုံးလုပျငနျး။ စာရှကျစာတမျးတှေ ပွုလုပျပွငျဆငျ၊ ဒတောအခကျြအလကျတှကေနေ စီးပှားရေးဖွဈမွောကျအောငျ အမြိုးမြိုး လုပျကိုငျရတဲ့အလုပျ။ ကုမ်ပဏီမှာပဲ အေးအေးဆေးဆေး အလုပျလုပျရတာမြားပါတယျ။
စီးပှားရေးဆိုငျရာ manner အပွုအမူဗဟုသုတ၊စညျးမဉျြး (အခွခေံလောကျဖွဈဖွဈ သိထားရမယျ)
ပေါငျးသငျးဆကျဆံရေး (ဂပြနျစာ N3အထကျ)
ကှနျပြူတာအခွခေံနှငျ့အထကျ တတျကြှမျးရ ( Microsoft word,excel)
ဝနျထမျးရေးရာပိုငျးပေါ့နျော။ဒီအပိုငျးကတော့ ဂပြနျလူမြိုးတှေ မြားမယျထငျပါတယျ။ ဝနျထမျးချေါယူတာကအစ ဝနျထမျးအဆငျပွပွေအေလုပျလုပျနိုငျအောငျ ထောကျပံ့ပေးရတာ။ စီမံဌာနပေါ့
စီးပှားရေးဆိုငျရာ manner အပွုအမူဗဟုသုတ၊စညျးမဉျြး
ပေါငျးသငျးဆကျဆံရေး (ဂပြနျစာ N3၊N2၊N1)
ကှနျပြူတာတတျကြှမျးရ ( Microsoft word,excel)
ဝနျဆောငျမှုပိုငျး ကောငျးမှနျရငျ ပိုအဆငျပွေ
အကွီးအကဲရဲ့ လကျထောကျ၊ ။ လုပျငနျးပိုငျး အခြိနျခှဲခွမျးစီမံတာကအစ၊ စာရှကျစာတမျးပိုငျး စဈဆေးရတာတှအေထိ ။ဂပြနျမှာတော့ ဒီအလုပျနရောက ဂပြနျလူမြိုးမြားပါတယျ။
ပေါငျးသငျးဆကျဆံရေး (ဂပြနျစာ N1အထကျ)
ရုံးဘဏ်ဍာရေး၊ စာရငျးအငျး စသဖွငျ့
စာရငျးအငျးအထောကျအကူပွု လကျမှတျ၊ လိုငျစငျ (သို့) certificate
ဧညျ့သညျလာရငျ ဧညျ့ခံ ဝနျဆောငျမှုပေးရ။
ပေါငျးသငျးဆကျဆံရေး (ဂပြနျစာ N2၊N1)
ဝနျဆောငျမှုပိုငျးဆိုတော့ စကားပွောဆိုတတျမှ ပိုအဆငျပွပေါတယျ။
ဖုနျးအျောပရတော၊ ဖုနျးနှငျ့ ဆကျသှယျပွောဆိုရမှာပါ။
ပွဿနာဖွရှေငျးတဲ့အနနှေငျ့ ဖုနျးဆကျသှယျရတာရှိသလို၊ လုပျငနျးအခြိတျအဆကျနှငျ့ ဆကျသှယျရမှာ ဖွဈတဲ့အတှကျ ဂပြနျစာအရညျအခငျြးကတော့ တျောတျောစကားပွောနိုငျရမှာပါ။
ဂပြနျမှာ မားကတျတငျးလို့ပွောလိုကျရငျ営業ပိုငျးနှငျ့ နညျးနညျးတော့ကှာပါတယျ။
နောကျဆုံး အသုံးခစြမေယျ ဆိုတဲ့ အလုပျဖွဈပါတယျ။
စီမံရေးအပိုငျးလို့လညျး ပွောနိုငျပါတယျ။ဂပြနျမှာတော့ Web Marketing ခတျေဖွဈပါတယျ။ အငျတာနကျကို အသုံးခပြွီး analysis။ ခှဲခွမျးစိတျဖွာနညျးကတော့ တဈခုနှငျ့ တဈခု မတူညီကွဘူးပေါ့။ ကိုယျ့လုပျငနျးတိုးတကျဖို့ အမွဲရှာဖှနေတောပေါ့။
ခှဲခွမျးစိတျဖွာသမားလို့ ပွောရငျလညျး ရပါတယျ။
အထောကျအကူပွု လကျမှတျ (မရှိရငျလညျး အဆငျပွပေါတယျ)
ကနျြအလုပျအကိုငျအသုံးအနှုနျးလေးတှကေိုတော့ နောကျတဈပါတျမှ တငျဆကျပေးပါမယျနျော။
နှဈသဈမှာ ပြျောရှငျမှုအပေါငျး ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစေ။
Previous Previous post: Happy New Year 2018 နှစ်သစ်ကူးဟင်းလျာ
Next Next post: ထရိန်နင်ဗီဇာဖြင့် အလုပ်လုပ်ရာဝယ် အပိုင်း(၂) : Technical Intern Training ②